Iifilimu ezingama-50 eziKhulu zokuBukela eziBukela kwiTubi
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	Iifilimu ezingama-50 eziKhulu zokuBukela eziBukela kwiTubi
by UBrianna Spieldenner Aprili 1, 2020
by UBrianna Spieldenner Aprili 1, 2020 30,420 imbono
Phantse wonke umntu uhlala ekhaya kule mihla, iindawo zokusasaza zifumana uqeqesho olungalindelekanga. Abantu abaninzi bebethontelana kwiNetflix, iNkulumbuso yeAmazon, kunye neHulu ukulinda ukubekwa bucala. Inkonzo yokusasaza iTubi, nangona kunjalo, ayibonakali ngathi ifumana umphunga omninzi, nangona isimahla. Ukuba unexesha lasimahla ezandleni zakho (esikwenzayo sonke), thatha ixesha lakho ukubukela iimovie ezingama-50 ezothusayo eTubi ngoku!
Umntu unokucinga ukuba ekubeni iyinkonzo yasimahla yokusasaza, ngekhe babe nekhathalogu elungileyo abanokukhetha kuyo, kodwa ngokuqinisekileyo ayisiyiyo imeko yeetoni zemidlalo bhanyabhanya eyoyikisayo yokubukela eTubi. Ndiququzelele iifilimu ngokwamanqanaba amahlanu: iimuvi ezihlekisayo zakudala, ezothusayo nezothusayo imovie, iimovie zangaphandle ezothusayo, ezothusayo ezothusayo kunye nezoyikiso zokuhlekisa, ndafumana imifanekiso bhanyabhanya eyoyikisayo. Ke funda apha ngezantsi ukujonga ezona bhanyabhanya zoyikisayo ukubukela iTubi!
Iifilimu zeHorror zakudala kwiTubi
I-Texas Chain yabona Ukubulawa kwabantu (1974): Ibali elicekisekayo likaTobe Hooper losapho lakwaSawyer lokutya abantu, betyhoboza eTexas omnye okwishumi elivisayo ngexesha!
Hellraiser (1987): Ii-80s zaziphambene, le bhanyabhanya i-crazier. Ibhokisi yephazili eyahlukeneyo, i-zombie engenasikhumba, i-BDSM, iidemon ezinxibe kakuhle, kunye neebhakethi zegazi. Lo mboniso bhanyabhanya unakho konke.
Ukurhoxiswa (1977): Enye yeefilimu ezaziwa kakhulu zeGiallo ezikhokelwa lilivo uDario Argento. Le flick inemibala ilandela intombazana yaseMelika ebhalisa kwisikolo esidumileyo saseJamani esiqhutywa ngokufihlakeleyo ngamagqwirha.
Usuku labafile (1985): Ukulandelwa okubhiyozelweyo kobusuku bukaGeorge Romero kunye nokuDlula kwabafileyo. Iqela lezenzululwazi kunye nabezomkhosi banamathele ngaphakathi kwigumbi elingaphantsi komhlaba njengoko i-apocalypse zombie ibasongela ngentla.
Carnival yeMiphefumlo (1962): Umboniso bhanyabhanya omnyama nomhlophe ongaxabisekanga apho kwenzeka izinto ezingaqhelekanga kumfazi emva kwengozi yemoto eyintlekele.
Killer Klown Ukusuka Kwindawo engaphandle (1988): Lo mboniso bhanyabhanya uyoyikisayo unabaphambukeli abazifihlisileyo njengaboyikisayo idolophu yaseMerika.
Inkampu yokulala (1983): Le nkampu yehlobo i-slasher yinkcazo yekampu, kunye nesiphelo oya kukhumbula.
Rabi (1977): Ingqungquthela kaDavid Cronenberg kunye ne-zombie ye-sex-fueled. Umfazi omncinci ukhula ngendlela engaqhelekanga emenza ukuba anqwenele igazi emva kokuhlinzwa kakhulu emva kwengozi yesithuthuthu.
Ijinja ivele (2000): Le bhanyabhanya izayo yeminyaka yobudala yeyona bhanyabhanya ihlaziyayo yewolf oyakuze uyibone. Iziphumo ezibonakalayo ezifanelekileyo zilungile ngakumbi.
Ukubulawa kwabantu ngeSlumber Party (1982): I-maniac ye-drill ephathekayo ephazamisayo iphazamisa iqela lokulala ngesondo kule fayili yeklasi. Ikwenza kancinci ukulungelelanisa uhlobo lwe-slasher ngeendlela ezintle ngaphambi kwexesha lazo.
Amaphepha: 1 2 3 4 5